सहि समयमा सहि निर्णय ! - Laltin Media
Home»मोटिभेसन»सहि समयमा सहि निर्णय !
सहि समयमा सहि निर्णय !
By लाल्टिन डट कम April 6, 2022 No Comments1 Min Read
एकजना मानिसले आफ्नो बच्चालाई सोधे, “तिमीलाई थाहा छ पुराना शिकारीहरूले बाँदरलाई कसरी पासोमा फसाउने गर्थे?” बच्चाले आफूलाई थाहा नभएको जनाउँदै टाउको हल्लाए ।
त्यसपछि, बाबाले भने, “बाँदरहरुलाई रूखमाथि लखेट्नु वा तलबाट तीर हान्नको सट्टा, शिकारीहरुले भुइँमा साँघुरो घाँटी भएको एउटा भारी गिलासको भाँडोमा बाँदरहरूको मनपर्ने खाना राख्थे। त्यसपछि अप्रत्याशित रुपमा जनावरको नजिक पुग्नको लागि लुकेर पर्खि बस्थे।” बच्चाले जिज्ञासु भई सुनिरहेका थिए ।
उनले थपे, “त्यति योजना पूरा भएपछि बाँदर खानाको वरिपरि पुग्थे र मुट्ठी बाँधेर खाना बाहिर तान्न कोसिस गर्दथे। तर, जारको साँघुरो घाँटीका कारण बिचरा बाँदरले आफ्नो मुट्ठी बाहिर निकाल्न सक्दैनथे! उसले तान्ने धेरै कोसिस गर्थ्यो तर सब बिफल हुन्थ्यो। खाना नछोडी भाँडोबाट हात निकाल्ने कुनै उपाय थिएन।”
बच्चाले ठूल-ठूला आँखा बनाउँदै सुनिरहेको थियो । बाबाले भन्दै गए, “मुट्ठी खोल्नुको सट्टा, बाँदरले आफ्नो बेलुकीको खाना छोड्न अस्वीकार गर्दै अडिग रहन्थ्यो। त्यसपछि शिकारीहरू नजिक पुग्थे र आफ्नो खानाको आनन्द लिन बाँदरलाई समात्थे।”
“त्यो बाँदर जस्तो नहुनु,” बाबाले बालकलाई सचेत गराए, “जीवनमा, लड्न र व्यक्तिगत वृद्धिका लागि, आफूलाई थाहा हुनुपर्दछ कि कहिले के कुरा छोड्ने, कहिले अगाडि बढ्ने, र कहिले आफूलाई रोकिरहेको कुरालाई त्याग्ने !”
कहिलेकाहीँ तपाईंले भविष्यमा अझै ठूलो उचाई प्राप्त गर्नको लागि अहिले आफूसँग भएको कुरा त्याग्नुपर्छ। बेतुकको जिद्दीबाट आफ्नो पतन हुन दिनु हुँदैन !
स्टेफेन हकिंग: हरेक नियम तोडेर अमर भएको वैज्ञानिक !